Faah-faahinta Ciyaarihi Xalay ee CL
Waxaa xalay dhacay ciyaaro xiisa leh oo ka tirsan wareega koowaad ee koobka Horyaalada Yurub ee Champions League.
Kooxda Chelsea ayaa jab kala soo laabatay magaalada Roma oo ay marti ugu aheyd kooxda AS Roma ee dalka Talyaaniga. Is aragi hore ee labadan kooxood oo ka dhacay London wuxuu kusoo dhamaaday bareejo 3-3 ah.
Hase yeeshee natiijadi kasoo baxday kulanki xalay Roma aad ugu duwanaa tii London, sababtoo ah Roma waxay ugu awood sheegatay Chelsea 3-0.
Goolasha waxaa laba ka mid ah dhaliyay Stephan El Shaarawy halka gool kalana uu ku daray Diego Perotti.
Chelsea waxay hadda 4 dhibcood ka sareysa kooxda ku jirta kaalinta sadexaad ee Atletico Madrid oo xalay bar barro 1-1 ah la dhaafi wayday naadiga Qarabag ee dalka Azerbaijan.
Kooxaha kale ee guulaha waaweyn soo hooyay waxaa ka mid ah kooxda Paris St-Germain oo 5-0 ku dardartay Anderlecht.
Waxaa si weyn uga soo dhexmuuqday kulankaan laacibka dadabka bidix ee daafaca uga ciyaara kooxdani ee Layvin Kurzawa oo dhaliyay saddex gool. Wuxuu noqday difaaci ugu horeeyay oo tartanka Yurub ka dhaliya sadex gool.
Goolasha kale waxaa PSG u keenay Verratti iyo Neymar. Guushaasina waxay u dirtay wareega labaad ee 16-ka.
Bayern Munich oo ay PSG isku group-yihiin-nna waxay 2-1 ku garaacday kooxda Celtic.
Manchester United, waxay 2-0 ugu awood sheegatay Benfica. CSKA Moscow ayaa 2-1 ku garaacday FC Basel. Juventus waxay hal dhibic kala soo laabatay kooxda Sporting oo ay iskula agdhaceen barbarro 1-1, halka Barcelona iyo Olympiacos ay isku mari waayeen bareejo 0-0 ah.